မေ ၁၈၂၉ တွင် မော်လမြိုင်သည် တနင်္သာရီတိုင်း၏ မြို့တော်ဖြစ်လာချိန်မှစ၍ ဗြိတိသျှအစိုးရသည် မြို့တွင်းလမ်းများကို စတင်ဖောက်လုပ်သည်။ အရှေ့တပ်မြို့လမ်း (ယခုထောင်ကြီးရှေ့လမ်း)နှင့် အနောက်တပ်မြို့လမ်း (ယခုလေးထပ်ဈေးအနောက်ဘက်လမ်း၊ လမ်းနှစ်လမ်းသာ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိပြီး၊ မြို့တွင်းရှိ အခြားလမ်းများမှာ အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသည်။ ၁၈၄၄ ခုတွင် အထက်လမ်းမကြီးနှင့် အောက်လမ်းမကြီးတို့ကို ဖောက်လုပ်သည်။ မုပွန်မှ ဒိုင်းဝန်ကွင်းအထိလည်းကောင်း၊ ဒိုင်းဝန်ကွင်းမှ ညောင်ပင်ဆိပ်အေနာက်ဘက်အထိလည်းကောင်း၊ ဒိုင်းဝန်ကွင်းမှ ငန်းတေးသို့လည်းကောင်း လမ်းများကို ဆက်လက်ဖောက်လုပ်သည်။
၁၈၃၁ ခုမှ ၁၈၅၆ ခု (၂၅)နှစ်အတွင်း မော်လမြိုင် မီးကြီး (၆)ကြိမ်လောင်သည်။ (၆)ကြိမ်လောင်သော မီးများအနက် ပေါ့ဆမီးမှာ အများဆုံးဖြစ်သည်။ ပဉ္စမနှင့် ဆဋ္ဌမအကြိမ် ၁၈၅၇ ခုနှင့် ၁၈၅၆ ခုများတွင် လောင်သော မီးများမှာ အာဏာပိုင်များရှိသော မီးဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ထိုမီးနှစ်မီးလောင်အပြီးတွင် ဟော့ဒေး (Mr.Hobday)က မီးလောင်သောရပ်ကွက်များသို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာ၍ ရပ်ကွက်များကို အကွက်ချပြီး လမ်းများဖောက်လုပ်သည်ကို တွေ့ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အမှုဆောင်အင်ဂျင်နီယာ ဖာလောင် (Furlong) လက်ထက် ၁၈၆၀ ခုမှ ၁၈၆၂ ခု (၂)နှစ်အတွင်း တောင်ပေါ်လမ်း၊ မုပွန်လမ်းနှင့် ကျိုက္ခမီလမ်းကိုဖောက်လုပ်သည်။ ထို့နောက် တောင်ဝိုင်းလမ်းကို ဆက်လက်ဖောက်လုပ်သည်။ ထိုစဉ်က လမ်းများကို မြေလမ်းအဖြစ် စတင်ဖောက်လုပ်၍ ဂဝံကျောက်ထပ်ခင်းသည်။
မော်လမြိုင်ကမ်းနားလမ်းစတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံမှာ စိတ်ဝင်စားဘွယ်ကောင်းသည်။ မော်လမြိုင်တွင် သစ်နှင့် ဆန်စပါးရောင်းဝယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသောအခါ မော်လမြိုင်မှ သစ်နှင့် ဆန်စပါးဝယ်ယူရန် နိုင်ငံခြားသင်္ဘောများ မော်လမြိုင်ဆိပ်ကမ်းသို့ အဝင်အထွက်များလာသည်။ မော်လမြိုင် ဆိပ်ကမ်းမှာလည်း စည်ကားလာသည်။ နိုင်ငံခြားသင်္ဘော အဝင်အထွက်သည် တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုမိုများပြားလာသည်။ ၁၈၆၁-၆၂ ခုတွင် မော်လမြိုင်ဆိပ်ကမ်းသို့ နိုင်ငံခြားသင်္ဘောအစီး (၄၆၀)ဝင်ရောက်၍ (၄၅၄)စီး ထွက်ခွာသည်။ အများစုမှာ အိန္ဒိယသင်္ဘောများဖြစ်ကြသည်။ ထိုစဉ်က မော်လမြိုင်ဆိပ်ကမ်းသို့ ဦးတည်လာသော ရွက်သင်္ဘောများသည် ကုန်ပစ္စည်းအနည်းကိုသာ တင်ဆောင်လာသဖြင့် ဝန်ပေါ့သည်။ လှိုင်းထချိန် လေပြင်းတိုက်ခတ်ချိန်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသောအခါ သင်္ဘောမှာ အလွန်လူးသည်။
သင်္ဘောမလူးစေရန် အလျားအနံထု (၂)ပေခန့်စီရှိသော ခြောက်မျက်နှာ ကျောက်တုံးကြီးများနှင့် အခြားသင့်လျော်သည့် ကျောက်တုံးများကို တင်ဆောင်လာရသည်။ မော်လမြိုင်ဆိပ်ကမ်းသို့ရောက်သောအခါ ကျောက်တုံးများကို ချထားခဲ့သည်။ ထိုကျောက်တုံးများဖြင့် ကမ်းနားလမ်းကို စခင်းသည်။ မူလကမ်းနားလမ်းသည် ထားဝယ်တံတားမှ အမှတ်(၄) တံတားအထိသာ ရှိသည်။
ဤသို့ဖြင့် မော်လမြိုင်မြို့တွင်း လမ်းများကို တစ်ဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ဖောက်လုပ်ခဲ့ရာ ကိုလိုနီခေတ်ကုန်ဆုံးခါနီးတွင် မော်လမြိုင်မြို့တွင် လမ်းများသည် မိုင် (၇၀)ကျော် ရှည်လျားလာသည်။
မော်လမြိုင်မြူနီစီပယ်အဖွဲ့ ၁၉၅၂-၅၃ ခုနှစ်အတွက် နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာအရ (၁၆)စတုရန်းမိုင် ကျယ်ဝန်းသော မြူနီစီပယ်နယ်နိမိတ်အတွင်း –
ကျောက်ခင်းလမ်း ၄.၇၂ မိုင်
ကတ္တရာခင်းလမ်း ၃၉.၃၆ မိုင်
ဂဝံကျောက်ခင်းလမ်း ၉.၆၃ မိုင်
တောင်ကျောက်ခင်းလမ်း ၂.၄၃ မိုင်
ကျောက်မခင်းရသေးသောလမ်း ၁၆.၅၂ မိုင်
စုစုပေါင်း ၇၂.၆၆ မိုင် ရှိသည်။
၁၉၆၀ ခုတွင် မော်လမြိုင် ဥပစာကောလိပ် ပထမဆုံးကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးတိုးအောင် (ခေတ်စမ်းစာရေးဆရာကြီးကုသ)က မော်လမြိုင်မြူနီစီပယ်အဖွဲ့၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်က အင်္ဂလိပ်အမည်ရှိသော လမ်းပေါင်း (၆၀)၏ အမည်ကို မြန်မာအမည်သို့ပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။
ကွင်းဆင်းသုတေသနပြုချက်အရ အင်္ဂလိပ်အမည်မှ မြန်မာအမည်သို့ ပြောင်းလဲထားသော လမ်း (၄၈)လမ်းအမည်ကို ထပ်မံတွေ့ရသည်။ နှစ်ရပ်ပေါင်း (၁၀၈)လမ်း၏ အမည်များကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာစဉ်အလိုက် ဖော်ပြပါသည်။
၁။ Abreu Road = စကားဝါလမ်း
၂။ Ady Lane = သစ်တောရုံးလမ်း
၃။ Ah Jit Sin Street = အာဂျစ်ဆင်လမ်း
၄။ Amherst Road = ကျိုက္ခမီလမ်း
၅။ Aglan Street = ညောင်ရိပ်သာလမ်း
၆။ Atram Street = အရေးပိုင်ကုန်လမ်း
၇။ Battery Point Road = မီလောင်ပြင်လမ်း
၈။ Bengali Street = သုခလမ်း
၉။ Blacksmith Street = ပန်းပဲတန်းလမ်း
၁၀။ Blake Street = မန္တလေးလမ်း
၁၁။ Blundell Street = ဝတ်ကြီးလမ်း(ယခင်သာယာကုန်းလမ်း)
၁၂။ Bogle Road = ရှမ်းစုလမ်း
၁၃။ Briggs Road = ကွင်းကျောင်းလမ်း
၁၄။ Bridge Road = ပြည်သူ့လမ်း
၁၅။ Broadfoot Street = ဝတ်သစ်လမ်း
၁၆။ Burmah Street = မြန်မာလမ်း
၁၇။ Campbell Street = ရွှေတောင်လမ်း
၁၈။ Carthew Street = သူဇာလမ်း
၁၉။ China Street = ကလျာဏီသိမ်လမ်း
၂၀။ China Street = ပုလဲလမ်းအထက်ပိုင်း
၂၁။ Chittagong Street = စင်ရော်လမ်း
၂၂။ Chureh Lane = မိန်းကလေးကျောင်းလမ်း
၂၃။ Coal Yard Street = ကျောက်မီးသွေးရုံလမ်း
၂၄။ Coluin Road = တောင်ခြေလမ်း
၂၅။ Commissary Land = သထုံတံတားလမ်း
၂၆။ Commissioner Road = မင်းကြီးလမ်း
၂၇။ Condamine Street = ကံ့ကော်လမ်း
၂၈။ Coryton Avenue = မြောက်ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမတော်
၂၉။ Court House Road = ရုံးကြီးလမ်း
၃၀။ Crisp Street = သားသတ်ရုံလမ်း
၃၁။ Dalhousie Road = ဗဟိုလမ်း
၃၂။ East Cantoment Road = အရှေ့တပ်မြေလမ်း
၃၃။ Engineer Road = အင်ဂျင်နီယာလမ်း (ယခင်သီလရှင်လမ်း)
၃၄။ Fallon Street = သီတာလမ်း
၃၅။ Four Banyar Trees Street = ညောင်လေးပင်လမ်း
၃၆။ Freemason Street = သိပ္ပံလမ်း
၃၇။ Furlong Road = ငန်းတေးလမ်း (ဒိုင်းဝန်ကွင်း)
၃၈။ Fytche Road = အောင်သုခလမ်း
၃၉။ Gardiner Street = ဂန္ဓမာလမ်း
၄၀။ Gording Street = ဂေါ်ရင်ဂျီလမ်း
၄၁။ Great Pagoda Road = ကျိုက်သံလန်ဘုရားလမ်း
၄၂။ Hill Road = မဟာမြတ်မုနိဘုရားလမ်း
၄၃။ Hopkinson Road = တောင်ပေါ်လမ်း (မြောက်ပိုင်း)
၄၄။ Hospital Road = ဆေးရုံကြီးလမ်း
၄၅။ Hough Street = နှင်းဆီလမ်း
၄၆။ Hough Street = သင်္ဂဟလမ်း
၄၇။ Hutchinson Street = လှိုင်ဈေးလမ်း
၄၈။ Impey Road = ပိတ်နေပြီ
၄၉။ Innes Street = သံလွင်ဥယျာဉ်လမ်း
၅၀။ Insane Hospital Road = အုတ်ဖိုလမ်း
၅၁။ Kalaolan Street = ယုဇနလမ်း
၅၂။ Ko Taung Gyi Street = ကိုတောင်ကြီးလမ်း
၅၃။ Kwingyaung Street = ကွင်းကျောင်းလမ်း
၅၄။ Kyaikpanai Street = လမ်းသစ်လမ်း
၅၅။ Kyaikpanai Pagoda Street = ကျိုက်ဖနဲဘုရားလမ်း
၅၆။ Kyaukton Road = ကျောက်တန်းလမ်း
၅၇။ Limouzin Street = လိမ္မော်ဇင်လမ်း
၅၈။ Lower Main Road = အောက်လမ်းမကြီး
၅၉။ Lyster Main Road = အောက်လမ်းမကြီး
၆၀။ Macky Street = ရဲသွေးလမ်း
၆၁။ Macrae Street = မဂ္ဂင်လမ်း
၆၂။ Magazine Road = ရဲမြန်မာလမ်း
၆၃။ Maingy Street = မြို့မတံတားလမ်း
၆၄။ Malay Street = ကျိုက်သုတ်ဘုရားလမ်း (ယခင် ပသျှူးလမ်း)
၆၅။ Mango Raod = သရက်ကုန်းလမ်း
၆၆။ Maungalay Street = မောင်ကလေးလမ်း
၆၇။ Maungan Street = မောင်ငံလမ်း
၆၈။ Miller Street = မာလာလမ်း
၆၉။ Mission Street = သုတလမ်း (ဒိုင်းဝန်ကွင်း)
၇၀။ Mission Street = ထားဝယ်တံတားလမ်း
၇၁။ Mission School Street = ကရင်ကျောင်းလမ်း
၇၂ ။ Montgomenic Road = တောင်ပေါ်လမ်း (တောင်ပိုင်း)
၇၃။ Morton Lane = ကျိုက်သုတ်ဘုရားလမ်း (အပေါ်ပိုင်း)
၇၄။ Mould Street = မြတ်လေးလမ်း
၇၅။ Mupon Road = မုပွန်လမ်း
၇၆။ Narcis Lane = စည်ပင်သာယာလမ်း
၇၇။ Ngante Road = ငန်းတေးလမ်း (မောင်ငံ)
၇၈။ Old Cantoment Road = ဈေးကြီးတောင်ပေါ်တန်းလမ်း
၇၉။ Old Court House Road = ရုံးဟောင်းလမ်း
၈၀။ Parsee Street = ဖာရစီလမ်း
၈၁။ Pattala Street = ပတ္တလားလမ်း
၈၂။ Pearl Street = ပုလဲလမ်း
၈၃။ Pegu Lane = ဘုရားလမ်း
၈၄။ Pemberton Street = သိမ်ကုန်းလမ်း
၈၅။ Penha Street = မြခွာညိုလမ်း
၈၆။ Phettan Street = ဖက်တန်းလမ်း
၈၇။ Phongyi Lane = ရွာဟောင်းလမ်း (ကွယ်ပျောက်သွားပြီ)
၈၈။ Ryan Street = ရတနာလမ်း
၈၉။ Railway Jetty Street = မီးရထားလမ်း
၉၀။ Sandan Road = ဆန်တန်းလမ်း (ဒိုင်းဝန်ကွင်း)
၉၁။ Sandan Road = ဆန်တန်လမ်း (ဈေးကြို)
၉၂။ Sloughter Road = ဓမ္မစာရီလမ်း
၉၃။ South Pagoda Road = ဦးဇိနဘုရားလမ်း
၉၄။ Strand Road = ကမ်းနားလမ်း
၉၅။ Sulherland Street = မြူနီစီပယ်ရုံးလမ်း
၉၆။ Tachambe Street = ချမ်းအေးလမ်း
၉၇။ Tasel Lane = စက်တန်းလမ်း
၉၈။ Talaing (Mon) Street = မွန်လမ်း
၉၉။ Tank Street = ကန်လမ်း
၁၀ဝ။ Taungwine Road = တောင်ဝိုင်းလမ်း
၁၀၁။ Tauoyzu Street = ထားဝယ်စုလမ်း
၁၀၂။ Tenasserim Street = တနင်္သာရီလမ်း
၁၀၃။ Thana Street = ဌာနာလမ်း
၁၀၄။ Upper Main Road = အထက်လမ်းမကြီး
၁၀၅။ Washerman Street = ရွှေဗျိုင်းဖြူဘုရားလမ်း
၁၀၆။ West Cantonment Road = အနောက်တပ်မြေလမ်း
၁၀၇။ Williom Street = အရေးပိုင်ကုန်းလမ်းကြားနှင့်
၁၀၈။ Yedan Street = ရဲတန်းလမ်း တို့ဖြစ်ကြသည်။
Arkar Kyaw April 11, 2017 At 9:01 PM
I really love to read colonial
eta hostory of Moulmein and tried
to Kyaw Saya Gyi U Aunt KGyi
personally twice unfortunately I
didn’t meet him and didn’t even have
his address. Anyway thank you for
sharing on your web.
Arkar Kyaw April 11, 2017 At 9:03 PM
Sorry Colonial era
Tawkahlaing April 12, 2017 At 6:46 PM
I think there is one street missing in the list. I can’t find the name of the street in No.72. After 71 and it jump to 73.
Shoot King April 12, 2017 At 7:05 PM
This Street is = ၇၂ ။ Montgomenic Road = တောင်ပေါ်လမ်း (တောင်ပိုင်း)